မှေးမွူရေး ကွကျသား နဲ့ အမြိုးသမီးမြားအတှကျ ကနျြးမာရေးအန်တရာယျ – Daily Feed MM
Admin_John | November 20, 2020 | Knowledge, Lifestyle | No Comments
အလှအပကိုကွိုကျနှဈသကျကွတဲ့ မမ….တို့ရေ…ကွကျတောငျပံကွျောကို နစေ့ဉျရကျဆကျစားသုံးခွငျးဟာ အမြိုးသမီးတှအေတှကျတကယျ့အန်တရာယျတခုဆိုတာကို မြှဝလေိုကျတာပါ….ဒါကတော့ စငျကာပူက အမြိုးတမီးတဦးရဲ့ဖွဈရပျမှနျ အကွောငျးလေးပါ။မကွာသေးမီက အမြိုးတမီး တယောကျ သူ့ရဲ့ဗိုကျထဲမှာ သှေးခဲလိုလို ပွညျတညျသလိုလို အခဲတခု ဖွဈပွီးကွီးကွီးလာတာကွောငျ့ ခှဲစိတျပွီး ထုတျပွဈလိုကျရတဲ့အထိဖွဈသှားပါတယျ….အဲဒီအခဲဟာ ခှဲစိတျပွိးကွညျ့
လိုကျတော့ မဲပုပျနတေဲ့သှေးခဲကွီးပါတဲ့….သူမကတော့ ခှဲစိတျကုသပွီးနောကျမှာ ပုံမှနျပွနျကောငျးလာမယျလို့ပဲ ထငျခဲ့တာပေါ့…ဒါပမေယျ့.. သူထငျတာနဲ့တတျတတျစငျအောငျလှဲခဲ့ပါ့တယျ…ခှဲစိတျထုတျပဈပွီး လအနညျးငယျအကွာမှာ အရငျလိုပဲ ဗိုကျထဲမှာ သှေးခဲလိုလို ပွညျခဲလိုလို ပွနျဖွဈလာပွနျရောတဲ့….ဒုက်ခပါပဲနျော…သူလဲ အရမျး စိတျ သောကရောကျရတာပေါ့….ဒါနဲ့ သားဖှားမီးယပျပါရဂူ တယောကျဆီ ခကျြခငျြးသှားပွကွညျ့တော့…ဆရာဝနျက သူမကို
မေးခှနျးတခုမေးတယျ….မေးခှနျးက သူမအတှကျတေျောတျောကိုထူးဆနျးနတေယျ…..ကွကျတောငျပံကို နစေ့ဉျရကျဆကျစားသလား ….တဲံ့….သူမက…စားပါတယျ လို့ပဲဖွတေယျ…စားလဲ စားတာကိုး….သူမ ကွကျတောငျပံကွျောအမွဲ တမျးစားနကေဆြိုတာ ဘယျလိုသိပါသလဲလို့ တောငျအံ့သွတကွီးပွနျမေး မိသေးတယျ…..ကဲကွညျ့…ဘာကွောငျ့သူဒီလိုရောဂါဖွဈတာလဲ…ဒီနခေ့တျေမှာ ကွကျတှေ မွနျမွနျကွီးထှားလာစဖေို Steroids ဟိုမုနျးတှပေါတဲ့ကွီးထှားဆေးတှေ
သုံးလာကွပါတယျ….Steroids ဟိုမုနျးတှပေါတဲ့ ကွီးထှားဆေးကို ကွကျတှရေဲ့.တောငျပံနဲ့ လညျပငျးနရောတှမှော ပဲ အမွဲထိုးပေးလရှေိ့တယျ..ဒါကွောငျ့ Steroids ဟိုမုနျးတှအေမြားဆုံးစုနတေဲ့နရောကတော့တောငျပံနဲ့လညျပငျးတှမှောပါပဲ….ဒီ Steroids ဟိုမုနျးတှဟော မွနျမွနျကွီးထှားစတေတျတဲ့သဘောကွောငျ့ ….ခန်ဒာကိုယျထဲမှာ ကွောကျစရာကောငျးလောကျအောငျ အကြိုးဆကျတှဖွေဈလာတာပေါ့….ဒါဟာဘာအတှကျလဲ….တကယျတော့ သူတို့ရဲ့
လိုအပျခကျြက … ကွကျတှမွေနျမွနျကွီးထှားလာစဖေို့ပဲမဟုတျလား….ဒါပမေယျ့….အခု အမြိုးသမီးတှကေို တိုကျရိုကျ ထိခိုကျလာပါပွီ….အမြိုးသမီးတှမှော လကျရှိ ရှိနတေဲ့ မ.ဟျောမုနျးတှကေိုပါ အန်တရာယျ ကရြောကျစတေဲ့ပွငျ….
ဗိုကျထဲမှာ သှေးခဲလိုလို ပွညျခဲလိုလို မဲပုပျနတေဲ့ အခဲတှေ ကွီးထှားလာစတေတျတဲ့ ရောဂါတမြိုး ပိုပွီးဖွဈလှယျလာစပေါတယျ…အမြိုးသမီးတို့မှာ အရသာရှိလှတဲ့ ရိုးရာဟငျးလြာတှေေ ရှိကွတာပေါ့နျော….ဒါပမေယျ့….အမြိုးသမီး
ကနျြးမာရေးက အသကျဆကျလကျရှငျသနျဖို့ရာ ပိုပွီိးအရေးကွီးပါတယျ…ဒါကွောငျ့ မမတို့ကို ဝမြှေလိုကျပါတယျနျော….မမတို့ခန်ဒာကိုယျ အလှမပကျြရအောငျ ….ကိုယျအလေးခြိနျကိုလဲ ထိနျးရာရောကျအောငျ ကွကျတောငျပံ ကို နစေ့ဉျရကျဆကျ စားသုံးခွငျးက နေ တတျနိုငျသလောကျ လြှော့စားကွပါလို့…အခွား မမ .တှေ.. (မမ.ရှိသူတှေ) ဆီကိုလဲ ဒါကို လကျဆငျ့ကမျးပေးကွပါဦးနျော…..။
ခငျမငျစှာဖွငျ့….Ng (Sharon How (Singapore Medical Association) ဧ။ျ Beware Chicken Wings ကိုဆီလြှျောအောငျဘာသာပွနျသညျ။)
အလှအပကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြတဲ့ မမ….တို့ရေ…ကြက်တောင်ပံကြော်ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်စားသုံးခြင်းဟာ အမျိုးသမီးတွေအတွက်တကယ့်အန္တရာယ်တခုဆိုတာကို မျှဝေလိုက်တာပါ….ဒါကတော့ စင်ကာပူက အမျိုးတမီးတဦးရဲ့ဖြစ်ရပ်မှန် အကြောင်းလေးပါ။မကြာသေးမီက အမျိုးတမီး တယောက် သူ့ရဲ့ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်တည်သလိုလို အခဲတခု ဖြစ်ပြီးကြီးကြီးလာတာကြောင့် ခွဲစိတ်ပြီး ထုတ်ပြစ်လိုက်ရတဲ့အထိဖြစ်သွားပါတယ်….အဲဒီအခဲဟာ ခွဲစိတ်ပြိးကြည့်
လိုက်တော့ မဲပုပ်နေတဲ့သွေးခဲကြီးပါတဲ့….သူမကတော့ ခွဲစိတ်ကုသပြီးနောက်မှာ ပုံမှန်ပြန်ကောင်းလာမယ်လို့ပဲ ထင်ခဲ့တာပေါ့…ဒါပေမယ့်.. သူထင်တာနဲ့တတ်တတ်စင်အောင်လွဲခဲ့ပါ့တယ်…ခွဲစိတ်ထုတ်ပစ်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာ အရင်လိုပဲ ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်ခဲလိုလို ပြန်ဖြစ်လာပြန်ရောတဲ့….ဒုက္ခပါပဲနော်…သူလဲ အရမ်း စိတ် သောကရောက်ရတာပေါ့….ဒါနဲ့ သားဖွားမီးယပ်ပါရဂူ တယောက်ဆီ ချက်ချင်းသွားပြကြည့်တော့…ဆရာဝန်က သူမကို
မေးခွန်းတခုမေးတယ်….မေးခွန်းက သူမအတွက်တော်တော်ကိုထူးဆန်းနေတယ်…..ကြက်တောင်ပံကို နေ့စဉ်ရက်ဆက်စားသလား ….တဲံ့….သူမက…စားပါတယ် လို့ပဲဖြေတယ်…စားလဲ စားတာကိုး….သူမ ကြက်တောင်ပံကြော်အမြဲ တမ်းစားနေကျဆိုတာ ဘယ်လိုသိပါသလဲလို့ တောင်အံ့သြတကြီးပြန်မေး မိသေးတယ်…..ကဲကြည့်…ဘာကြောင့်သူဒီလိုရောဂါဖြစ်တာလဲ…ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကြက်တွေ မြန်မြန်ကြီးထွားလာစေဖို Steroids ဟိုမုန်းတွေပါတဲ့ကြီးထွားဆေးတွေ
သုံးလာကြပါတယ်….Steroids ဟိုမုန်းတွေပါတဲ့ ကြီးထွားဆေးကို ကြက်တွေရဲ့.တောင်ပံနဲ့ လည်ပင်းနေရာတွေမှာ ပဲ အမြဲထိုးပေးလေ့ရှိတယ်..ဒါကြောင့် Steroids ဟိုမုန်းတွေအများဆုံးစုနေတဲ့နေရာကတော့တောင်ပံနဲ့လည်ပင်းတွေမှာပါပဲ….ဒီ Steroids ဟိုမုန်းတွေဟာ မြန်မြန်ကြီးထွားစေတတ်တဲ့သဘောကြောင့် ….ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် အကျိုးဆက်တွေဖြစ်လာတာပေါ့….ဒါဟာဘာအတွက်လဲ….တကယ်တော့ သူတို့ရဲ့
လိုအပ်ချက်က … ကြက်တွေမြန်မြန်ကြီးထွားလာစေဖို့ပဲမဟုတ်လား….ဒါပေမယ့်….အခု အမျိုးသမီးတွေကို တိုက်ရိုက် ထိခိုက်လာပါပြီ….အမျိုးသမီးတွေမှာ လက်ရှိ ရှိနေတဲ့ မ.ဟော်မုန်းတွေကိုပါ အန္တရာယ် ကျရောက်စေတဲ့ပြင်….
ဗိုက်ထဲမှာ သွေးခဲလိုလို ပြည်ခဲလိုလို မဲပုပ်နေတဲ့ အခဲတွေ ကြီးထွားလာစေတတ်တဲ့ ရောဂါတမျိုး ပိုပြီးဖြစ်လွယ်လာစေပါတယ်…အမျိုးသမီးတို့မှာ အရသာရှိလှတဲ့ ရိုးရာဟင်းလျာတွေ ရှိကြတာပေါ့နော်….ဒါပေမယ့်….အမျိုးသမီး
ကျန်းမာရေးက အသက်ဆက်လက်ရှင်သန်ဖို့ရာ ပိုပြီိးအရေးကြီးပါတယ်…ဒါကြောင့် မမတို့ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ်နော်….မမတို့ခန္ဒာကိုယ် အလှမပျက်ရအောင် ….ကိုယ်အလေးချိန်ကိုလဲ ထိန်းရာရောက်အောင် ကြက်တောင်ပံ ကို နေ့စဉ်ရက်ဆက် စားသုံးခြင်းက နေ တတ်နိုင်သလောက် လျှော့စားကြပါလို့…အခြား မမ .တွေ.. (မမ.ရှိသူတွေ) ဆီကိုလဲ ဒါကို လက်ဆင့်ကမ်းပေးကြပါဦးနော်…..။
ခင်မင်စွာဖြင့်….Ng (Sharon How (Singapore Medical Association) ဧ။် Beware Chicken Wings ကိုဆီလျှော်အောင်ဘာသာပြန်သည်။)
ကိုကျလနျရှကျက ဒီလောကျတောငျ အရေးပါလသေလား
ဈေးပေါပေါ ရောငျးနတေဲ့ ပွငျဦးလှငျကခွံတှဝေယျမယျဆို ဒါတှကေို သိထားပါ။